ဘေဘီလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်မာစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း (၈)ခု - Lifestyle Myanmar
ဘေဘီလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်မာစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း (၈)ခု
သင်မသိနိုင်တဲ့ ဘေဘီလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်သော အံ့သြစရာ (၁၀)ချက်
သင့်နားထဲမှာ တစ်ခါတလေ တဝီဝီမြည်တတ်တာ သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ပြောပြနေတာပါတဲ့
အပေးအကမ်း ရက်ရောလွန်းရင် ဘယ်လိုနောင်တတွေ တချိန်ချိန်မှာ ရလာနိုင်လဲ?
ကိုယ့်ထက် အသက်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးကိုချစ်မိတဲ့ မမတွေ ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာ ၈ ခု
ကမ္ဘာကြီးကို လှုပ်ခတ်နိုင်ခဲ့သော ကမ္ဘာကျော်တို့ရဲ့ သေဆုံးမှုများ
သင့်အချစ်ရေးကို ခိုင်မြဲစေမယ့် စုံတွဲယောဂလေ့ကျင့်ခန်း
သင့်ချစ်သူကောင်လေးက သင့်နဖူးကို နမ်းတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ
စိတ်ဓါတ် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်သူတွေ လူအများရှေ့ ဘယ်တော့မှ မပြောတဲ့ စကား ၅ခွန်း
ဓါတ်လှေကားခလုတ်တွေကို လက်နဲ့နှိပ်စရာမလိုအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက shopping Mall
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဖောလစ်အက်ဆစ် (Folic Acid ) သောက်သုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၅)ချက်
in Family, Fitness
ဘေဘီလေးတွေအနေနဲ့ အသက် ၁နှစ်အတွင်းမှာ ထိုင်ဖို့ ၊တွားသွားဖို့ (သို့) လမ်းလျှောက်ဖို့ ကြွက်သားတွေ တိုးလာရပါမယ်။ ကလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေ အားကောင်းလာအောင် အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ သုခချမ်းသာကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ လေ့ကျင့်ခန်းက အခြေခံကျပါတယ်။ ကိုယ်ကာယလှုပ်ရှားမှုက သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ မလိုအပ်သော အဆီကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး အရိုးနှင့် ကြွက်သားများကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ကလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားကောင်းလာအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ သို့မှသာ လိုအပ်သော motor skills ရှိနိုင်မှာပါ။ ထို့အပြင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အချိန်ဟာ ကျန်းမာသော အလေ့အကျင့် တည်ဆောက်ဖို့နှင့် ကလေးနဲ့ အချိန်ဖြုန်းဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေ အားကောင်းလာစေဖို့ အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း
ကလေးတွေနဲ့ မူကြိုကလေးတွေမှာ တနေ့လျှင် အနည်းဆုံး တစ်နာရီခွဲလောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ပုံမှန်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းက အဝလွန်မယ့် အခွင့်အလမ်းနှင့် ဒီအခြေအနေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တခြားရောဂါမျာကို လျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
ဘေဘီလေးတွေရဲ့ ကြွက်သားတွေ အားကောင်းစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း ဘာ့ကြောင့် လိုအပ်သလဲ?
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုက အထူးသဖြင့် အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ ကလေးရဲ့ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နေပါတယ်၊ ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့ ကလေးဟာ ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိသူတွေလို neurological connection မတည်ဆောက်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကလေးတွေကို အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးခြင်းက လူကြီးဘဝမှာလည်း ဒီအလေ့အထ ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ဟန်ချက်ညီပြီး flexibility ဖွံ့ဖြိုးဖို့ စတင်နိုင်ပါတယ်။
၁။ မွေးကင်းစမှ ၆လ
ကလေးကို အိပ်ရာပေါ်မှာ ပက်လက်ထားပြီး သူ့လက်တွေထဲမှာ သင့်လက်ညိုးထည့်ပေးပါ။ သင့်လက်ချောင်းတွေကို သူညှစ်တဲ့အခါ သူ့လက်တွေကို ကိုင်ပြီး အိပ်ရာကနေ သူ့ကိုယ်ထည်ကို ကြွလာအောင် ‘မ’ပေးပါ။ ကလေးဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သန်မာလာပြီး သူ့ဘာသာသူ ကြွဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ကလေးကို ပခုံးပေါ်မှာ မတ်မတ်ထားပါ။ ဒီအနေအထားမှာ ကလေးဟာ သူ့ခေါင်းကို စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် မတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် နောက်ပြန်လှန်မကျအောင် သူ့နောက်ကျောကို လက်ဖြင့် ထိန်းထားပေးပါ။
ကလေးကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ မှောက်ရက် ချထားပေးပါ။ ပထမဆုံး လအနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကလေးတွေဟာ ဒီအနေအထားကို အများကြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါက သူတို့ ကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ မှောက်ရက်အနေအထားနဲ့ သူခေါင်းကို လှည့်ဖို့ ကြိုးစားပါလိမ်မ့ယ်။
ကလေးကို ပက်လက်လှန်ထားပါ။ သူ့ခြေထောက်တွေကို စက်ဘီးစီးသလို ဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ရှားပေးပါ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ခြေထောက်တစ်ဖက်လျှင် သုံးကြိမ် ထပ်တလဲလဲလုပ်ပါ။ နောက်တစ်ခါ မလုပ်ခင် အနားပေးပါ။
၂။ ၆လမှ ၁၂လအထိ
ကလေးကို ပက်လက်ထားစဉ်မှာ သူ့လက်ဖျံကနေ ကိုင်ပြီး ခါးမတ်မတ် ထိုင်နိုင်အောင် ဆွဲထူပါ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှကြာအောင် ထားပြီး မူလအနေအထားသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပို့ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လေးကြိမ်လုပ်ပါ။
ကလေးကို မှောက်ခုံမှောက်ပြီး သူ့လက်ဖျံကို သူ့ပခုံးအောက်မှာ ဂရုစိုက်တစိုက်ထားပေးပါ။ ထို့နောက် သူ့တင်ပါးအောက်ကနေ မေမေတို့ လက်ဖြင့်ထိန်းပြီး ၄၅ဒီဂရီအထိ တင်ပါးကို မြှောက်ပေးပါ။
သင့်ကလေးရဲ့ ကြွက်သားတွေကို အားကောင်းစေဖို့ နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုက အရင်ဆုံးကလေးကို ပက်လက်လှန်ထားပါ။ သူ့ညာဘက်ခြေထောက်ကို ဆန့်နေအောင်ထားပါ။ သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်နားဆီသို့ တွန်းပါ။ မူလအနေအထားသို့ ပြန်သွားပါ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ငါးကြိမ်လုပ်ပါ။ ဘက်ပြောင်းပြီး ထပ်လုပ်ပေးပါ။
အများအားဖြင့် စက်ဘီးဟု လူသိများတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းက ဒီအရွယ်ရှိ ကလေးများအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ သူ့ကို ပတ်လက်ထားပြီး ခြေထောက်ကို ကိုင်ထားကာ စက်ဘီးနင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ပေးပါ။
ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း အလေ့အထမှာ ကလေးပါဝင်ချင်စိတ်ရှိဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ကာယလှုပ်ရှားမှုက မိသားစုကို စည်းလုံးစေနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာသော အလေ့အကျင့်ဖြစ်တဲ့အပြင် မိသားစုနှောင်ကြိုးကို မြှင့်တင်ဖို့ အရမ်းကောင်းသော မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးအား ကျန်းမာသော အလေ့အထများကို ရှာဖွေဖို့ ကူညီပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်လျော်သော လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များဖြင့် ပျော်ရွင်သော အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
စုံတွဲတွေ ယောဂပြုလုပ်ခြင်းက ထူးခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံကို အတူတူ မျှဝေခြင်းဖြင့် သင့်အချစ်ရေးကို တိုးတတ်ခိုင်မာစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ စိတ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ယောဂအကျိုးကျေးဇူးအားလုံးရဲ့ အားသာချက်ကို အသုံးချဖို့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စုံတွဲယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု...